यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्नैपर्छ : माधव नेपाल - Kohalpur Trends
यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्नैपर्छ : माधव नेपाल
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेको अनि अध्यादेश ल्याउँदिनँ भने झूटो बोलेको बताउँदै नेता नेपालले प्रश्न गरे, ‘वास्तवमा प्रश्न खडा हुन्छ, उहाँ पार्टी सदस्यका लागि लायक हो त ?’
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा नेता नेपालले कोही व्यक्तिले पार्टी छाडेर जाँदैमा नेकपा नफुट्ने दाबी गरे । ओलीमाथि कारबाही भए पनि पार्टी एकता यथावतै रहने उनले बताए । उनले केपी ओलीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘पार्टी छोडेर हिँड्नुभयो भने उहाँको कुरा भो । कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पार्टी नबस्न सक्छ, त्यो कुन ठूलो कुरा भयो र ?’
आगामी मध्यावधि चुनावमा पार्टी एकढिक्का भएरै जाला त भन्ने पश्नमा उनले चुनाव नहुने बरू संसद पुनर्स्थापना हुने बताए । अनलाइनखबरसँगको विशेष कुराकानीमा नेता नेपालले भने, ‘चुनावको प्रश्नै छैन, संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ ।’
प्रस्तुत छ नेता नेपालसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी-
अझ दुईजना मन्त्रीहरू (घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई) अनि रघुबीर महासेठलाई पनि जोड्ने हो भने अहिलेको संख्या ९५ पुगिसकेको छ । उहाँ अत्यन्तै अल्पमतमा पुगिसकेको व्यक्तिले संसद विघटन गर्नु यसै पनि गलत हो । विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकार संविधानले दिएको छैन । अल्पमतमा पुगेको मान्छेले गर्ने त प्रश्नै उठ्दैन ।
उहाँले आफू अल्पमतमा पुगेको तथ्यलाई लुकाएर जसरी राष्ट्रलाई नै संकटमा पुर्‍याउनुभयो, लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने काम गर्नुभयो । गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू उठिरहेका बेलामा गणतन्त्रप्रति वितृष्णा गर्ने पैदा गर्ने ढंगबाट उहाँका कदमहरू जसरी देखिए । यसबाट के बुझिन्छ भने कमरेड केपी ओलीमा यो देश, लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति कुनै माया छैन ।
स्वाभाविक रूपले यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीले कारबाही गर्नैपर्छ । पार्टीको स्थायी कमिटीले सिफारिस गरिसकेको छ, केन्द्रीय कमिटीले उहाँलाई कुन-कुन पदबाट कारबाही गर्ने हो । अध्यक्षमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाइसक्नुभयो । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बस्न लायक पनि हुनुहुँदो रहेनछ । वास्तवमा प्रश्न खडा हुन्छ, उहाँ पार्टी सदस्यका लागि लायक हो त ? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । पार्टीको विधानको मातहतमा रहनुपर्छ । पार्टीको निर्णयलाई सर्वोपरी ठान्नुपर्छ र लोकतन्त्र, गणतन्त्रको पक्षमा, लोकतान्त्रिक आचरण र विधिमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा पनि उहाँले कुल्चिनुभएकोले उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक चेत समेत गुमाउनुभएको छ ।
चुनाव त घोषणा भइसक्यो । अब यो चुनावमा पार्टी फुटेर जान्छ कि….
होइन, चुनावको प्रश्नै छैन । संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ । त्यो निर्णय नै बदर हुनुपर्छ । मलाई विश्वास छ- हाम्रो सर्वोच्च अदालत संविधानको सही व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ र गलत कदमलाई रोक्ने महत्वपूर्ण भूमिका पनि उसकै काँधमा छ । त्यसले सही निर्णय गर्नेछ । रीट पनि दर्ता भइसकेको छ । संसदभित्रका समीकरणको जानकारी पनि भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनुभन्दा पहिले नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छौं । संसद सचिवालयका महासचिवको हातमा त्यो कागज पुगिसकेको छ ।
म भन्न चाहन्छु, पार्टी कार्यकर्तालाई पार्टीभित्र यस्ता प्रवृत्ति बोकेका मान्छेहरु नेतृत्व तहमा पनि पुग्दा रहेछन् । रुसको पार्टीमा गोर्वाचोभ र येल्तसिन जस्ता मान्छेहरू पुगेका थिए, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिध्याइदिए । कम्युनिस्ट पार्टी नै विघटन गरिदिए । चीनको कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि लिन पियाओ प्रवृत्ति बोकेका मान्छेहरू नेतृत्व तहमा पुगेका थिए । उनीहरूको हातमा नेतृत्वको बागडोर पुगेको भए त्यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि सिद्धिन्थ्यो । तर त्यहाँका नेताहरूले बुद्धि पुर्‍याए । माओत्सेतुङले बुद्धि पुर्‍याउनुभयो । तेङ स्याओपिङले बुद्धि पुर्‍याउनुभयो । त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नुभयो । त्यसैको प्रभावले पार्टी र आन्दोलन जोगियो । तर त्यही कुरा रुसको हकमा देखिएन ।
Previous Previous post: सरकारलाई घेराबन्दीमा पुर्याइएपछि जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन : प्रधानमन्त्री (पूर्ण पाठ सहित)
Next Next post: ६३५१ परीक्षणमा ७४२ जनामा कोरोना संक्रमण